दु,र्ग,न्धित फो,होर,को डं,गुरबाट भे,टियो पैसा,को बो,रा । – Taja Khawar
दु,र्ग,न्धित फो,होर,को डं,गुरबाट भे,टियो पैसा,को बो,रा ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १९, २०७८ समय: १८:२७:३०
दुर्गन्धित फोहोरको डंगुरबाट भेटियो पैसाको बोरा ।
4 hours अघि 240 Less thanaminute
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९,गलेश्वर शिवालय मन्दिरको बाहिर रहेको प्रतीक्षालयमा बस्ने एक बृद्धाको कोठमा रहेको दुर्गन्धित फोहोरको डंगुरबाट हजारौं रुपैयाँ नगद रहेको पैसाको बोरा फेला परेको छ। वर्षौंदेखि गलेश्वरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई मागेर खाद्यान्न, लत्ताकपडासहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु थुप्रो पारेर लगाएकी बृद्धा दिलमाया विक सुत्ने कोठा सरसफाई गर्दा ७८ हजार रुपैयाँ फेला परेको गलेश्वर आमा समूहकी अध्यक्ष गौमायाँ गर्बुजाले बताइन्।
चिसो बोरालाई आगोमा हाल्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा एक सयको नोट देखिएपछि तत्कालै निकालिएको गर्बुजाले जानकारी दिइन्। एउटा बोराभरिको पैसा करिव एक घण्टालगाएर गन्दा ७८ हजार भएको गर्बुजाको भनाई छ। अधिकांश नोट भिजेको अवस्थामा फेला परेका थिए। बोरामा रहेका ५, १०, २०, ५० र १ सयका नोट रहेका थिए। दैनिक मन्दिर तथा आसपासका क्षेत्रमा माग्ने गरेकी विकको यस अगाडि समेत फोहोर पन्छाउँदा १२ हजार र ७ हजार रुपैयाँ भेटिएका थिए। ती भेटिएका पैसा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिने गरिएको छ।
‘बिहे कहिले गर्ने? बिहे गर्ने बेला भएन? सधैं यहि रूप-रङ रहने होइन, अब पनि नगरे बूढी भइन्छ। कसैसँग जोडिएकी छैनौ?’ ‘बिहे भएको पनि यत्रो वर्ष भयो, बच्चा कहिले त? महिलाले समयमा बच्चा नपाएपछि दुःख पाउँदा बल्ल थाहा हुन्छ।’ ‘बल्ल ब्याचलर पो पढ्दै! अनि पहिल्यै पो सक्नुपर्छ त पढाइ, हरेक कुरा समयमा गर्नुपर्छ– पढाइ, बिहे अनि बच्चा।’ यी र यस्ता प्रश्नको घेरामा सधैं परें/परिरहेको छु। विशेषगरी मेरा शुभचिन्तकबाट यस्तै प्रश्न आउँछन्।
हामी सबैको आआफ्ना काम र कर्तव्य छन्। सबै आआफ्ना जिन्दगी बाँचिरहेका छौं। तर हामीले आफ्नोभन्दा पनि अरूका बारेमा चाहिनेभन्दा बढी चासो र टिप्पणी गरिरहेका हुन्छौं। हामी आफूलाई मानौं, न्यायाधीश नै ठानेर यो गरे ठीक, यो गरे बेठीक भनेर फैसला सुनाइरहेका हुन्छौं।
यी प्रश्न, मलाई मात्र होइन, हरेक महिलालाई सोधिने प्रश्न हुन्। जब कुनै बालिका किशोरी हुन्छे, तब उसले बिस्तारै बिस्तारै समाजबाट उमेरअनुसारका प्रश्नको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिस चेतनशील प्राणी हो; सृष्टिकै सर्वश्रेष्ठ प्राणी। त्यसैले त हामी हात्ती, सिंहजस्ता आफूभन्दा कैयौं गुणा ठूला भीमकाय जनावरहरू पनि खोरमा थुनेर आफ्नो इशारामा नचाउन सफल भएका छौं
बडो चिन्ताका साथका अगाडि भनिन्, ‘चाँडै बच्चा पाएँ– हेर्नु त मेरा छोरीहरू कति छिटो हुर्किसके, आफूलाई पनि सजिलो भएको छ। साथीजस्तै भएका छौं। अब त पाए हुन्छ, महिलाको शरीर हो, सधैं एकनासको हुँदैन।’ लामै सल्लाह दिइन्। उनी मात्र होइन, मैले प्राय: सबैबाट यस्तै सल्लाह/सुझाव पाइरहेकी हुन्छु। ‘अब त अबेला भइसक्यो है!’ यो सबै विवाहित महिलालाई भनिने कुरा हाे।
झन्डै ७ वर्षको अन्तरमा मैले बिहेपछि पुनः अध्ययन अगाडि बढाएँ। आफूलाई धेरै नियालेर चिन्ने कोसिस गर्दा बल्ल यो कुराको बोध भयो। यसबीच मैले बाहिरी किताब पढेँ। साँच्चै, किताबले त जिन्दगीको रिक्तता भरिदिँदोरहेछ। हुन त मेरै अनुभव सबैका लागि उपयोगी हुन्छ नै भन्ने होइन। सबैले आफूलाई बुझ्न र चिन्न समय लाग्छ। कसैले छिटो आफूलाई चिन्छन् त कसैल अलि ढिला।
समय कहिले सकिएको हुँदैन। उमेर त एउटा नम्बर मात्र हो। यसले हाम्रो सपनालाई रोक्न सक्दैन। त्यसैले कसैले केही भन्छ कि भनेर डराउनुको साटो जीवनमा गर्न बाँकी कुरा आजैबाट सुरु गरौं। प्लस टु पढ्दाताका हाम्रो सरले पढाउँदा सधै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘१२ कक्षा पनि पास भएनाै भने त भोलि आफ्नै श्रीमान् र छोराछोरीले पनि हेप्नेछन्। अनि बल्ल थाहा पाउनेछौ।’